စစ်ကောင်စီက ၄င်းတို့ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော် အတွင်း နေရာ ၃ ခုတွင် Oxygen Plant များ တည်ဆောက် - Myanmar Pressphoto Agency
Japan MPA Naypyidaw Oxygen Plant
အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည် တော် ကောင်စီနယ်မြေအတွင်း Oxygen Plant များ တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီ၏ အဆင့်မြင့် အရာရှိတဦးက အတည်ပြုသည်။
ဇမ္ဗူသီရိ ဆေးရုံ၊ ပုဗ္ဗသီရိ ဆေးရုံနှင့် စစ်တပ်ဆေး ရုံတစ်ခုတို့တွင် Oxygen Plant တခုစီ တည် ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး ပုဗ္ဗသီရိဆေးရုံတွင် တည် ဆောက်မည့် Plant သည် အများဆုံး ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တရက်လျှင် 40 လီတာအိုး ၁၄၄၀ လုံး ဖြည့်တင်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“Oxygen Plant တွေ ဆောက်မယ်။ ဒီအပတ်ထဲ ဖြည့်လို့ရမယ်လို့ သိရတယ်။ ခုရက်ပိုင်းကလည်း နေပြည်တော်မှာ အောက်စီဂျင်ရှာရတာ အဆင်မပြေဘူး။ မနက် ၄ နာရီလောက်ထဲက ၃ ဖွဲ့လောက်ခွဲပြီးရှာရတာ” ဟု နေပြည်တော်အခြေစိုက် ပရ ဟိတ အသင်းတခု၏ တာဝန်ရှိသူက MPA သို့ပြောသည်။
နေပြည်တော်တွင် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက် မနေ့ကထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ ၅၀၀၀ နီးပါးရှိနေပြီး သေဆုံးမှုနှုန်း နေ့စဥ် မြင့်တက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ နေပြည်တော် အပါအဝင် အခြား မြို့ကြီးအများစုတွင် အောက်စီဂျင်ပြတ်လပ်မှုများ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ Oxygen Plant များ ယခင် အရပ်သား အစိုးရ လက်ထက်က ရန်ကုန်နှင့် မန္တ လေးတို့တွင် အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက တည်ဆောက် ပေးခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီ အနေဖြင့် ယခုစတင်၍ နေပြည်တော်တွင် တည်ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
#နေပြည်တော် #OxygenPlant #COVID19 #MPA
The Junta Builds Three Oxygen Plants in Their Headquarters, Naypyitaw
17 July 2021 By MPA
Three oxygen plants are going to be built in Naypyitaw Council, the Headquarters of the Junta, according toahigh-ranked official.
Oxygen plants will be built in Zabuthiri hospital, Boppa Thiri hospital and military hospital with the biggest one being placed in Boppa Thiri hospital which would be capable of producing 1440 of 40-liter tanks per day.
“We’re going to build oxygen plants. It’ll be in use this week. Finding oxygen is not easy in Naypyitaw these days. We have to split into three groups from 4am to find it,”aNaypyitaw-based charity organization official told MPA.
In the previous civilian government, oxygen plants were built in Yangon and Mandalay by Civil Society Organizations and now the junta is building them in Naypyitaw.